ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ “လုံးဝ” မပြုလုပ်သင့်သော အချက်(၁၀) ချက်
၁။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ အိပ်ခြင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အိပ်စက်သည့်အချိန်သည် သာမန်လူများ အိပ်စက်ချိန်ထက် ပို၍ တိုတောင်းသောကြောင့် သင့်ကို အိပ်ရေးပျက်စေပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အမွှေးများကလည်း သင်၏ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ၂။ ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်း ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့အပြင် ရေနွေးပူကို (၁၀)မိနစ်လောက် […]
“မေ”လ တစ်လလုံးအတွက် ၇ ရက်သားသမီး ဗေဒင်ဟောစာတမ်း…
“မေ”လ တစ်လလုံးအတွက် ၇ ရက်သားသမီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း စီးပွားရေး . . တနင်္ဂနွေသားသမီးများက ဒီလမှာတော့ စွန့်စွန့်စားစားလုပ်ရမယ့် ကိစ္စတွေ ရှောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်လေး အေးဆေးလုပ်ရင်တော့ အဆင်ပြေပြေလေး နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး စွန့်စားပြီး ကုန်လောင်တာတို့ […]
မမ​တွေရဲ့အသည်းကိုဖမ်းစားမယ့် အသက် (၁၁) နှစ်အရွယ်က​လေးမော်ဒယ်လေး “ကောင်းခန့်လှိုင်”
ခန့်လေးလို့ လူသိများတဲ့ ကလေးမော်ဒယ်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းခန့်လှိုင်ကတော့ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပေမဲ့ Junior Teen Mr. International Myanmar ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းခန့်လှိုင်ကတော့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် Modeling ပိုင်းမှာ ထူးချွန်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုတွေကိုလည်း […]
“တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသူတွေပါ…”
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူများက သတ်မှတ်ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်တာမျိုးပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သူ့ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းတွေက သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်လိုပြုမူတတ်သလဲ၊ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်သလဲ ပြီးတော့ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လို့ သင်ဟာဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေခဲ့ရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် […]
တောင်ကြီးမြို့ (၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုအား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ (၂)ရက်အတွင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းများဖော်ထုတ်
တောင်ကြီးမြို့ (၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုအား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ (၂)ရက်အတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းများဖော်ထုတ် နေပြည်တော်၊ မေ ၁ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈)နေ ဒေါ်အေးရွှေ ၇၀နှစ်၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ (မြင်းဖြူနှစ်ကောင်တိုင်းရင်းဆေးတိုက်ပိုင်ရှင်)၊ (ဖ)ဦးအန်ပန်သည် ပင်လုံမြို့၊ ကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲသို့ သွားရောက်ပြီး ၂၈-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ […]
လမ်းမပေါ် ကလေးလက်ကိုဆွဲရင်း ကားအောက်ပြေးဝင် သေကြောင်းကြံစည်မှု ( ရုပ်သံ )
လမ်းမပေါ် ကလေးလက်ကိုဆွဲရင်း ကားအောက်ပြေးဝင် သေကြောင်းကြံစည်မှု ( ရုပ်သံ ) ကသာမြို့ မီးပွိုင့်အနီးတွင် လူတစ်ယောက် သေကြောင်းကြံစည်မှု . .တချို့အရာတွေဟာ ကားဆိုင်ကယ်တွေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျ . .သေကြောင်းကြံတယ်ဆိုရင်လဲ သူများဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဖန် ၅၀၅ ကမ္ဘာ လည်းမကြောက် ၊ သားသမီးမျက်နှာကိုလည်း မထောက် […]
ယ​နေ့ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့စေ့ စပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေး “ဖိုးချစ်”
ယ​နေ့ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့မှာ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ စေ့ စပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေး “ဖိုးချစ်” မေဒေးနေ့မှာ စေ့စပ်ပွဲ ကျင်းပလိုက်တဲ့ ရွှေမင်းသားလေး ဖိုးချစ် ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေး ဖိုးချစ် တစ်ယောက် မေလရဲ့ပထမဆုံးရက် ဖြစ်တဲ့ မေလ၁ရက် မေဒေးနေ့လေး မှာ ၂၀၀ရ ခုနှစ်ကတည်းက […]
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( စ/ဆုံး )
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( စ/ဆုံး ) (၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း ငါးထောင် အထူးဆုကြီး သိန်း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၈၅၀၂၄ မိုးယံ(၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ငါးထောင် ဆုကြီးများ (၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ငါးထောင် […]
သရဲပူးတာကိုိ ..ပယောဂဆရာ… ခေါ်စရာ မလိုဘဲ …ကိုယ်တိုင် သရဲနှင်နည်း…
ပဲခူးကစက်ရုံမှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သရဲပူးတယ်ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ပါလာတော့ ဟိုးလေးတကျော်ပေါ့ ။ အခုမှကြားဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက အံသြကြတာပေါ့ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စကိုး …. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး မထူးဆန်းတော့ဘူးဆိုလို့ ဘာဆရာလား ညာဆရာလား ထင်နေကြဦးမယ် ဘာဆရာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ခဏခဏကြုံဖူးနေ ကြားဖူးနေလို့ပါ။ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်တွေမှာဆို […]
“၂၀၁၉” ခုနှစ် မေလအတွက် ထူးခြားမည့် ဖြစ်စဉ်များ…
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွက် ထူးခြားမည့် ဖြစ်စဉ်များ အာကာသနှင့် ပတ်သက်ပြီး.. လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွင်းမှာ ထူးခြားမယ့် ဖြစ်စဉ်အချို့ကို အာကာသနှင့်စကြဝဠာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ လက်ရှိ လဆန်းပိုင်းမှာ အထူးရေပန်းစား သတိပြုသင့်တာကတော့ စူပါ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး ဖာနီ (Fani) ဖြစ်ပါတယ်။ […]